Global Voices teny Malagasy » Feo avy any Zimbaboe sy ireo Farihy Lehibe (Grands Lacs) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Jona 2019 9:08 GMT 1	 · Mpanoratra Zimpundit Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Mainty, Malawi, Oganda, R.D. Kongo, Zimbaboe, Fahalalahàna miteny, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jolay 2006)
Zimbaboe: Azo lazaina ho nafotetak'ireo horohoro nateraky ny tetikasan-dalàna izay mamela ny governemanta hanara-maso an-tsokosoko ireo fihetsika an-tambajotran'ny vahoaka ny tontolon'ny blaogy Zimbaboeana. Nampanginina ireo feo maro tamin'izy ireo, izay namela banga be voamarika tao amin'ny tantaran'ny iray tamin'ireo krizy ratsy indrindra maneran-tany. Miangavy, aza esorina ao anatin'ny eritreritrareo sy ny vavakareo ireo blaogera mahery fo an'ity firenena ity. Mbola misy blaogera sasantsasany ihany mijanona; ireto misy sasany amin'ireo olana taterin-dry zareo:
Taorian'ny fivakisana sarotra, latsaka tao anatin'ny adihevitra vaovao ny MDC (mpanohitra) ao Zimbaboe taorian'ny fanafihana an'i Gertrude (Trudy) Stevenson . Stevenson, izay nifanaraka tamin'ny rantsana “mpomba ny antenimieran-doholona” an'i Arthur Mutambara, no solombavambahoakan'ny fizarantanin'i Harare Avaratra miaraka amin'ny lokon'ny MDC. Kiriko tamin'izany fanafihana izany  i Zimpundit.
Mamoaka lahatsoratra ary miresaka mikasika ireo lohateny lehibe mikasika an'i Zimbaboe isanandro ny The Bearded Man .
D.R.C>:Mizara amintsika ny fandraisany ireo fivoaran-draharaha mifandraika amin'ireo fifidianana  i Carl ao amin'ny “Because we're here boy no one else; just us”. Ahitana ireto izany; fampitomboana ireo fisafoana ataon'ny tafika an'habakabaka, ny fahatongavan'ny tariky ny Firaisambe Eoropeana, fandrahonana ady nataon'ilay kandidà tamin'ny fifidianana filoham-pirenena raha toa ka tsy mandeha tsara ny fifidianana, ary fikambanana mpanavotra manatsahatra ny asany ao amin'ny firenena.
Mandritra izany fotoana izany, manontany tena i Fleurdafrique raha toa ho tranga ara-tantara vaovao fotsiny ihany ireo fifidianana ireo na ho demokratika :
Tokony hipetraka eto ve izaho dia hiteny hoe “mba farafaharatsiny aza isika misy fifidianana”? Inona no ilàna ny fanaovana izany raha toa ka efa mazava hoe iza no mitarika ny lanonana?
Tena misy olona eo am-pamanizana mihitsy an.
Malaoi (Malawi): Ao anatin’ity lahatsoratra ity , mitondra teboka iray ana avarapianarana saingy voafintina i Mike, blaogera mpiresaka teknolojia ao amin'ny Hacktivate.
Ogandà: Mankalaza ny zava-bitan'i Ghanaa tamin'ny lalao famaranana ny Fiadiana izay ho Tompondaka Erantany , i Dadennism ao amin'ny Country Boyi,
Na izany ivelan'i Angola, Togo, Tonizia, Cote d'Ivoire, tena fahombiazana lehibe mihitsy ny nahatratran'ny Black Stars izany dingana izany. Fandraisan'i Ghana anjara voalohany tamin'ny Fiadiana ny ho Tompondaka Erantany izany, niatrika an'i Brezila laharana faha-18. Ary ahoana no hahafahantsika mahazo antoka fa tsy niantso Amazoniana mpisikidy ireo tovolahy Samba mba hanampy azy ireo?
Tsy azo lavina fa nanome ny sasany tamin'ireo fotoana tena nampitolagaga indrindra ry zareo Black Stars. Namela fiheverana isika hoe dia tsy ampy mpamarana ara-klinika izay tokony namadika ireny fotoana ireny tao anatin'ny tsatokazo sy koa famaranana nahagaga aza.
Resy isika saingy niady. Tsy mbola tara izao hakàna lesona avy amin'ny hadisoana. Tsikelikely, hahatratra ny faratampony isika, jereo fotsiny amin'ny 2010.
Tezitra amin'ny Filoha Museveni i Jay's Idle Notes  noho ny
ny fomba fitantanany ny zava-drehetra sy ny fomba fitantanany ny firenena toy ny toeram-piompiany manokana. Resy lahatra izy (miezaka mafy ny handresy lahatra ny olona rehetra raha ny marina) hoe tsy misy manana ny tsara ao ao am-pony ny amin'ny firenena ka tsy maintsy hisahana ny asa mahasorena amin'ny fitantanana ny saram-pianaran'ny oniversite rehetra, manapaka hoe iza no manorina aiza, manome tany ho an'ireo mpampiasa vola (fifanekem-panofàna mandritra ny 99 taona sy ny zavatra rehetra) sy ny sisa. Fieboeboana re izany!!
Mibanjina ireo fijery mikasika ny fitantanana ara-elektronika ho an'i Ogandà i Inktus.
Manana zavatra vitsivitsy tokony hodinihana ao anatin'ity lahatsoratra ity  i Lovely Amphibian
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/30/139083/
 Kiriko tamin'izany fanafihana izany: http://zimpundit.blogspot.com/2006/07/sick.html
 The Bearded Man: http://thebeardedman.blogspot.com/
 Mizara amintsika ny fandraisany ireo fivoaran-draharaha mifandraika amin'ireo fifidianana: http://becausewerehereboy.blogspot.com/2006/07/who-can-figure.html
 manontany tena : http://fleurdafrique.com/blog/2006/07/11/historic-and-democratic-elections/
 ity lahatsoratra ity: http://www.vdomck.org/blog/2006/07/04/you-cant-make-a-basket-out-radio-waves/
 Mankalaza ny zava-bitan'i Ghanaa tamin'ny lalao famaranana ny Fiadiana izay ho Tompondaka Erantany: http://dennozbug.blogspot.com/2006/06/we-went-down-fighting_115150517052328380.html
 ay's Idle Notes: http://lehommenoir.blogspot.com/2006/07/museveni-has-done-it-again.html
 hodinihana ao anatin'ity lahatsoratra ity: http://febdimencionzx.blogspot.com/2006/07/things-to-ponder.html